भरतपुर अस्पतालमा १३ बर्षीया बालिकाले ज’न्माइन छोरी ! काकाको छो’रा बि’रुद्ध ब’ला’त्कार गरेको अभि’योग – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /Health/भरतपुर अस्पतालमा १३ बर्षीया बालिकाले ज’न्माइन छोरी ! काकाको छो’रा बि’रुद्ध ब’ला’त्कार गरेको अभि’योग
भरतपुर अस्पतालमा १३ बर्षीया बालिकाले ज’न्माइन छोरी ! काकाको छो’रा बि’रुद्ध ब’ला’त्कार गरेको अभि’योग
लमजुङ । लमजुङ सदरमुकाम बेसीशहरकी १३ बर्षीया बालिका आमा बनेकी छन् । बालिकाले आफू आमा बनेपछि आफ्नै गाउँका एक आफन्त (नाता पर्ने) युवकका वि’रुद्द ज’वर्ज’स्ती क’रणीमा मु’द्दा दा’यर गरेको प्रहरीले जनाएको छ । बालि’काले आफ्नै नाता पर्ने एक पु’रुष वि’रुद्ध जव’र्जस्ती क’रणीको उ’जुरी दिएको जिल्ला प्रहरी कार्या’लय ल’मजुङले जनाएको छ ।
ज’वर्ज’स्ती क’रणी ऐन अन्तर्गत उ’जुरी प्राप्त भएको प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक गंगाबहादुर थापाले बताए । ‘ज’वर्ज’स्ती क’रणी ऐन अन्तर्गत उजुरी दि’एपछि आ’रोपित युव’कलाई का’रबाहीको दा’यरामा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।’ उनले भने । सदरमुकाम बेसीसहर नगरपालिकाकी स्थायी बासिन्दा उनले चितवनको भरतपुरस्थित भरतपुर अस्पतालमा श’ल्यक्रियाका माध्ययमबाट छोरी ज’न्माएकी थिइन् ।
बलिकाकी आ’माका अनुसार अस्प’तालबाट डिष्चार्ज भएर सु’त्केरी बा’लिकालाई लिएर घर लम्जुङ जान लागेकी थिइन् । तर, गाउँलेले गाउँ नआउन दबाब दिएपछि बेसीसहरमा डेरा गरी बस्न बा’ध्य भएको बताइन् । सु’त्केरी बा’लिकाले यस बर्ष ८ कक्षा उत्तिर्ण गरेकी छिन् । उनको जन्ममिति २०६४ भदौ रहेको छ । आफ्नो गाउँमा जान सहज नभएपछि उनीहरु मानव अधिकार बादी संस्था र गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा बे’सीसहरमा डेरा गरी बस्न बाध्य भएका छन् ।
जिल्ला स्थित ग्रामीण सामुदायिक विकास केन्द्र (आरसीडीसी), इन्सेक लमजुङका प्रतिनिधि दलबहादुर मजाकोटी, बेसीसहर नगरपालिकाको सहयोगले बा लिका, उनको छोरी र आमा तिनैजना अहिले बेसी सहरमा डेरा गरी बसेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र कोपिला नेपालको सहयोगमा पोखरा स्थित को’पिला नेपालले सञ्चालन गरेको ‘सेफ होम’मा बालिका र उनकी छो’रीलाई पठाउने तयारी गरिएको इन्सेकका जिल्ला प्र तिनिधि द लबहादुर म जाकोटीले जानकारी दिएका छन् ।-राजधानी दैनिकबाट